Usola ukunganaki ngokudliwa kweKaizer Chiefs umakadebona onguWillard Katsande - Impempe
Usola ukunganaki ngokudliwa kweKaizer Chiefs umakadebona onguWillard Katsande
February 18, 2021 Impempe.com
Izingwevu zeKaizer Chiefs u-Itumeleng Khune noWillard Katsande
Uyikhomba emkhubeni wokunganaki inkinga yokushayiswa okwentandane kweKaizer Chiefs umdlali okade afika kuleli qembu laseNaturena, uWillard Katsande.
Uthi uma bengaqinisa ekutheni babe semdlalweni uqala uze uyophela, bese belandela nemiyalelo yoMqeqeshi, izinto zingajika bayeke ukuba yinhlekisa.
“Singenelwa amagoli ngezikhathi ezibucayi ngenxa yokunganaki. Kumele sibe semdlalweni kuze kube kukhala impempe yokuwuqeda – siqaphele kuze kuphele imizuzu engu-90,” kusho le nsizwa edabuka eZimbabwe.
“Imidlalo iwinwa noma ilahlwe ngalezo zikhathi la wonke umuntu esebuka isikhathi athi, ‘sewuyaphela umdlalo.’ Kumele senze kangcono kunalokhu.
“Okunye kumele silalelisise umqeqeshi senze lokho asuke esithume khona njengoba esuke eshilo,” kuqhuba u”Salt and Vinegar”.
Ukuzethemba kwehlile kuleli qembu kulandela ukushaya udaka kwalo emidlaweni emithathu edlule, okwenza kube nzima ukulibona lenza kangcono emidlaweni walo olandelayo njengoba lizobhekana neSuperSport United.
Nokho uKatsande uthi akungalahlwa mbeleko ngoba bazovuka bazithathe kulo mdlalo weDStv Premiership ozoba seFNB Stadium ngoMgqibelo ngo 3 ntambama.
“ISuperSport ihlezi isithwalisa nzima,” kuvuma uKatsande. “Emdlalweni wethu nabo akubalulekile ukuthi ubani osefonini noma odonsa kanzima, kuba wukuthi wubani ofuna ukuwina ngelanga lomdlalo.
“Sizozinikela ngayo yonke indlela ngoba sifuna ukujika izinto. Siyazi kuzoba nzima, kodwa okuhle ukuthi sizobe sisekhaya futhi sizozama ukuwina ngoba wumdlalo wethu wokugcina lo ngaphambi kokuba siqale umkhankaso weCAF Champions League esigabeni samaqoqo,” kuchaza uKatsande.
Uthe ukuwina kwabo kwiSuperSport kuzobafaka umfutho wokuyobhekana neHoroya. Amakhosi azobhekana naleli qembu laseGuinea ngoLwesibili ntambama.
Previous Previous post: Ujabulise okwengane iphiwe uswidi umgadli weChippa United u-Eva Nga eshaye igoli
Next Next post: Esinye isixakaxaka ngemidlalo yeCAF: iMamelodi Sundowns nayo seyinqatsheliwe ukuya e-Algeria